#Griezmann ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kulankii ay Atletico 3-0 kaga badisay garoonkeeda Celta Vigo axadii | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Griezmann ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kulankii ay Atletico 3-0 kaga...
Kooxda Atletico Madrid ayaa 3-0 ku xaaqday naadiga Celta Vigo sidoo kalena farqiga hogaanka La Ligaha Spain looga haayo waxay ka dhigeen 8-dhibcood oo ay Barcelona ka sareyso.
Antoine Griezmann ayaa gool dhaliyay sidoo kalena gool caawiyay kulankan asigoo iska dhaqay niyad jabkii uu todobaadkii hore ka qaaday kulankii Barcelona 1-0 ku garaacday kooxdiisa.
Antoine Griezmann ayaa goolka kowaad kulankan Celta Vigo kaga naxsaday daqiiqadii 44-aad sidoo kalena qaybta labaad markii la isku soo laabtay Griezmann ayaa caawiyay goolka Vitolo oo cayaarta 2-0 ka dhigay.
Cayaaryahan Angel Correa oo badal kusoo galay kulankan ayaa 3-0 ka dhigay cayaarta daqiiqadii 63-aad.
Atletico guusha ay 3-0 ku qaadatay waxay kaga dhigan tahay inay haatan leeyihiin 64-dhibcood 28-kulan oo horyaalka Spain la cayaaray waxayna 7-dhibcood ka sareeyaan Real Madrid oo sedexaad ku jirto halka iyagana ay 8-dhibcood ka hooseeyaan Barcelona oo horyaalka hogaanka u heyso waxaana ka harsan La Liga 10-kulan xili cayaareedkan